Transistor: mampiantrano sy mizara ny Podcast-nao amin'ity sehatra Podcasting ity | Martech Zone
Ny iray amin'ireo mpanjifako dia efa manao asa mahafinaritra amin'ny fampiasana horonan-tsary manerana ny tranokalany sy amin'ny YouTube. Miaraka amin'izany fahombiazana izany, mitady hanao antsafa lava kokoa sy lalindalina kokoa amin'ny vahiny, mpanjifa ary anatiny izy ireo mba hanampiana amin'ny famaritana ny tombotsoan'ny vokatra. Podcasting dia biby hafa mihitsy raha ny amin'ny fampivelarana ny paikadinao… ary miavaka ihany koa ny fampiantranoana azy. Eo am-pamolavolana ny paik'izy ireo aho dia manome topimaso momba ny:
Audio - fampivoarana intros, outros, ary antso ho amin'ny hetsika azo atao amin'ny podcast.
sary - fampivoarana ny sarinao podcast sy sarin'ny fizarana.
Content - Famolavolana kalandrie votoaty miaraka amin'ny hevitra hampiasana ireo fanontaniana ambony indrindra sy olana mifandraika amin'ny vokatra. Anisan'izany ny soso-kevitry ny vahiny sy ny fikarohana avy amin'ny antoko fahatelo hozaraina.
fampiantranoana - Ny mpizara podcast dia namboarina ho an'ny fampielezam-baovao, noho izany dia mifidiana mora ampiasaina, matanjaka, azo itokisana, sehatra fampiantranoana podcast dia zava-dehibe amin'ny fahombiazanao. Ny sasany koa dia manolotra mpilalao mahafinaritra.
Syndication - Ny mpampiantrano anao dia tokony hanana ny fahaiza-manao fanamboarana sakafo ilaina rehetra syndicate ny podcast mba hizarana ny votoaty amin'ny lahatahiry podcast sy sehatra finday teratany.
Analytics - Podcast analytics fitambaran'ireo fangatahana avy amin'ny tranokala nozarainao rehetra hiverina amin'ny lampihazo mba hampisehoana aminao ny fangatahana sy fihainoana manontolo.
Ireo endri-javatra ireo no tena antony tsy tianao hampiasana fotsiny ny serivisy fampiantranoana tranokala mahazatra hitantana ny podcast-nao. Tena zava-dehibe ny fahazoana sehatra fampiantranoana podcast lehibe… ary tianay Transistor!
Transistor manome fampiantranoana podcast, syndication ary analyse ho an'ny fikambanana, marika ary mpamorona an'arivony manerana izao tontolo izao. Ny sehatra dia natomboky ny podcasters matihanina izay nahita ny fahafahana hanangana sehatra feno. Ity misy topimaso momba ny sehatra:
Ny endri-javatra fototra amin'ny sehatra izay inoanay dia mahatonga azy io ho miavaka sehatra fampiantranoana podcast dia:
Podcast tsy misy fetra – mpampiantrano podcast maro no mandoa isaky ny seho… miaraka amin'ny Transistor dia azonao atao ny manana fampisehoana betsaka araka izay tianao amin'ny safidin'ny vidiny.
Podcast tsy miankina - matetika ny orinasa dia te-hizara podcast manokana ary ny Transistor dia mamela anao hitantana ireo mpanjifa ireo.
Tranonkala voaorina - tsy mila manangana tranokala hafa ho an'ny podcast-nao, misy ny rafitra fitantanana votoaty ao amin'ny sehatra misy azy.
Podcast Player – ampidiro mora foana ny mpilalao podcast tsara tarehy amin'ny tranokala hafa… ary manohana ny fahafahan'ny Twitter mampiditra mpilalao iray ao amin'ny lahatsoratrao Twitter izy ireo.
Mavitrika Ad fampidirana - ho an'ireo mpanohana lehibe antso ho amin'ny hetsika na fampisehoana.
Mpikambana fanampiny ao amin'ny ekipa – manana ekipa miasa amin'ny famoahana ny fampisehoanao ve ianao? Ampio ho mpampiasa fanampiny amin'ny kaontinao izy ireo.
Syndication Tools - amboary sy ampifandraiso amin'ny fitaovanao ny podcasto. Izy ireo aza dia manolotra fandefasana 1-tsindrio amin'ny Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Breaker, Player FM.
Podcast Search Engines - Submussion 1-tsindrio mba hihainoana ny fanamarihana sy ny Index Podcast.
tatitra - tatitra tsotra sy mitambatra ho an'ny seho rehetra ataonao, fizarana izay ahitana ny fihainoana rehetra.
Transistor manana ny fitaovanao hafa rehetra omena amin'ny interface tsara mpampiasa izay mora ampiasaina sy manomboka ny podcast-nao.
Misoratra anarana amin'ny fitsapana 14 andro maimaimpoana amin'ny transistor
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Transistor ary mampiasa ny rohy misy ahy aho mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: paomaApple PodcastsmpandikaGoogleGoogle Podcastsmihaino fanamarihanampilalao fmpodcast ityPodcast tafahoatrafizarana podcastfampiantranoana podcastpodcast indexpodcast tatitramotera fikarohana podcastsyndication podcastspotifyspotify podcastsny podcast indextransistor